ISeribu Resort ePramuka eWaka Island
Igumbi lakho lokulala e indlu enevaranda sinombuki zindwendwe onguAndi
UAndi unezimvo eziyi-51 zezinye iindawo.
I-Ody Dive Resort kwiSiqithi sasePramuka yeyona ndawo ilungileyo yokubaleka kwindawo ephithizelayo yaseJakarta.
Ixabiso lethu lemihla ngemihla libandakanya ukuhlala kwegumbi, isidlo sakusasa kunye ne-Snorkeling yasimahla. Sinikezela "kwinqanaba lokungena kwidives ye-novice kunye nabaqalayo kunye neeDives eziKhokelwayo" kunye nePadi yethu eqinisekisiweyo yokudibanisa ii-master divers.
Bubomi besiqithi obubufunayo kwaye sihlala sonwabile ukuba nawe kunye nathi.
Zonke iindwendwe, diver kunye non diver, bamkelekile kwi Ody Dive Resort. Siyi-5 star Padi dive center. Undwendwe kufuneka lukwazi ukubuza ngeenkcukacha ezithe vetshe ngomsebenzi wethu weDive eKhokelwayo nje ukuba ubhukishe, ngee-imeyile okanye ngomnxeba.
Iziko le-ODY DIVE lasekwa ngo-Okthobha 1999. Njengeziko le-PADI 5 leenkwenkwezi zokuntywila sizibophelele kwiinkalo ezine eziphambili, ezizezeMfundo, amava, iNdawo kunye neZixhobo.
Ulawulo lwethu lokuntywila luneminyaka engaphezu kwama-20 yamava kushishino lokuntywila. Senza uphononongo oluphantsi kwamanzi kunye ne-scuba diving adventures ukuba kwenzeke ngelixa sigcina imigangatho ephezulu yoqeqesho lwabantli, ukhuseleko kunye nenkonzo yabathengi.
Siya kuhlala sikhona ukunceda iindwendwe zethu kulo lonke ixesha lokuhlala kwazo kwiResort yethu